Iindaba - Ngaba ukukhanya kwesibane sokuSebenza akufakwanga kwigumbi OKANYE elinemigangatho ephantsi yomgangatho?
Kwiminyaka emininzi yokuthengisa kunye namava emveliso, sifumanise ukuba abanye abathengi bayabhideka xa bethenga ukukhanya kokusebenza.
Ye ukukhanya kokukhanya kwelayili, ukuphakama kwayo kokufakelwa ziimitha ezi-2.9. Kodwa eJapan, eThailand, e-Ecuador, okanye kwamanye amazwe ase-Afrika, iindawo zabo zemidlalo yeqonga zihlala ziphantsi kune-2.9 yeemitha ukuphakama. Ngaba abanakho ukufaka isilingiukukhanya kokusebenza?
Apha kufuneka siphakamise umbuzo malunga nokuphakama kobude, kwaye kufuneka siqinisekise kunye nomthengi ngaphambi kokufaka iodolo. Ukuphakama okubizwa ngokuba kukuphakama, oko kukuthi, ukuphakama komgangatho, kubhekisa kubude ukusuka kwisilingi yokuhombisa ukuya emhlabeni, hayi ukuphakama ukusuka eluphahleni ukuya emhlabeni. Ewe kunjalo, asekhona amanye amagumbi okusebenza angenalo olu nxibo lokuhombisa. Olu hlobo lwegumbi lokusebenza, ukuphakama kwalo kufakwa ngumgama ukusuka eluphahleni ukuya emhlabeni.
Buyela kumxholo kwakhona, zeziphi izisombululo esinazo njengomboneleli osebenzayo wokukhanya kunye neminyaka engama-20. Nceda ujonge inkqubo yokuthengisa phakathi kwam nomthengi wam omtsha wase-Ecuador.
Umthengi uthenga isibane esisebenza ngeentloko ezimbini se-LED yeklinikhi yezilwanyana. Ngaphambi kokubeka iodolo, ndimdinga ukuba abonelele ngobude bokufaka. Umfanekiso ongezantsi yinkqubo yokulinganisa ubude awabuyisayo.
Ekugqibeleni kuqinisekisiwe ukuba ukuphakama komgangatho ziimitha ezi-2.6 kuphela, ezingadibaniyo neemfuno zokuphakama komgangatho weemitha ezi-2.9.
Emva kokujonga ukuphakama ngokubanzi koogqirha kunye nokuphakamisa ukuphakama kwetafile yokusebenza, sagqiba kwelokuba samkele isicwangciso sokufaka esenziwe ngokwezifiso.
Sihlengahlengise isiphatho sesibane kwaye senza imizobo yabathengi ukuqinisekisa. Umxhasi uyavuma kwisicwangciso sethu sokuyila.
Emva kokufumana iimpahla nokuzisebenzisa kangangexesha elithile, umthengi wanelisekile.
Emva kwexesha, ngelixa wayetyelele igumbi lakhe elitsha lokusebenza, umhlobo wakhe ongugqirha walungelelanisa i-LED eneentloko ezimbini ukukhanya kokusebenza.
Apha, ndibulela ngokungazenzisiyo kugqirha wezilwanyana ondincedisileyo. Kufuneka ibe ziimveliso zethu ezinokuthenjwa kunye nenkonzo enolwazelelelo emva kokuthengisa ibashukumisile oogqirha.
Ngale meko yonxibelelwano, siyazi ukuba igumbi lokusebenza elinomgangatho ophakamileyo we-2.6m lisenemiqathango yokufaka isilingi ukukhanya kokusebenza.
Kodwa kukho amanye amatyala, njengokuphakama kwegumbi lokusebenza kumalunga ne-2.4m kuphela, kule meko, sicebisa abathengi ukuba basebenzise uhlobo lodonga ukukhanya kokusebenza okanye iselfowuni ukukhanya kokusebenza.
Apha ngezantsi sinemizobo yofakelo yesalathiso.
Ukusukela kwixesha lokukhanya kwe-halogen OT ukuya ekukhanyeni kwe-OT ye-LED, inkampani yethu iphantse yanama-20 eminyaka yamava kuyilo, imveliso kunye nokufakwa kwezibane zotyando ekhaya nakwamanye amazwe.
Ke ngoko, njengomthengi, ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga ukukhanya kokusebenza, ungathetha nathi kwiphepha lophando, siyavuya ukusombulula le ngxaki.
Nokuba akukho sivumelwano, amava onxibelelwano axabisekileyo anokusinceda senze izicwangciso ezingcono kwinkqubo yentengiso yexesha elizayo.